MHRA waxay oggolaatay Epidyolex (cannabidiol) oo loogu talagalay Daaweynta Tuberous Sclerosis Complex • Daroogada Inc.eu
MHRA waxay ansixisay Epidyolex (cannabidiol) si loogu daweeyo isku -buufinta tuubada caagga ah
Daawooyinka GW waxay oggolaansho ka heleen Epidyolex® (cannabidiol) si loogu daweeyo weerarada isku -buuqa tuubada (TSC) ee UK.
GW Pharmaceuticals, oo hadda qayb ka ah Daawooyinka Jazz, ayaa ku dhawaaqay in Daawada iyo Bogsashada UKTHCyihiin badeecadaha Wakaaladda Xakameynta (MHRA) waxay oggolaatay tilmaam cusub oo loogu talagalay Epidyolex® (cannabidiol); sida daaweynta ka -hortagga qalalka ee la xiriira isku -buufinta tuubada 'sclerosis complex' (TSC) ee bukaannada laba sano jira iyo kuwa ka weyn. Tuberous Sclerosis Complex (TSC) waa xaalad la iska dhaxlo oo burooyinka aan fiicnayn ku soo baxaan meelo kala duwan oo jirka ah.
Cannabidiol loogu talagalay daaweynta burooyinka iyo suuxdinta
"Waxaan ku faraxsanahay go'aanka MHRA ee tilmaantan cusub, oo u taagan tallaabo weyn oo horay loogu qaaday bukaannada TSC ee UK," ayuu yiri Chris Tovey, Madaxweyne Ku -xigeenka Fulinta ee Jazz Pharmaceuticals.
Epidyolex, oo ah dawadii ugu horreysay ee ku salaysan xashiishadda, waxaa oggolaaday Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Maraykanka (FDA) si loogu isticmaalo Maraykanka iyo Guddiga Yurub (EC) si loogu isticmaalo Midowga Yurub (EU). Waa xal afka ah oo ay ku jirto cannabidiol aad loo nadiifiyey (CBD) ku jira. Wakaaladda Daawooyinka Yurub (EMA) ayaa oggolaatay dawada lagu daweeyo qallalka la xiriira LGS, Dravet syndrome iyo TSC.
Akhri wax dheeraad ah europeanpharmaceuticalreview.com (Source, EN)
Gitaar-caanka caanka ah ee Carlos Santana wuxuu ku bilaabmaa nooc u gaar ah haramaha
Carlos Santana wuxuu ka beddelayaa heestiisa "Moonflower" una wareegayaa ubaxa marijuana. Ninka tobanka jeer ku guuleystay Grammy iyo ...
Isticmaalka marijuana inta lagu jiro uurka waxay kordhisaa khatarta cudurka maskaxda ee gabowga
Haweenka uurka leh ee isticmaala xashiishadda waxay halis ugu jiraan ilmahooda aan dhalan goor dambe ...